Iimveliso ze-TSL zibonisa iiVuselelo zoMatshini bayo kwi-Audio Monitorin Solutions kunye neNkqubo yoLawulo lweSasazo kwi-NAB NY 2019 -I-NAB Bonisa Iindaba ngu-Broadcast Beat, Umsasazi osemthethweni we-NAB Show-NAB BONISA IXESHA
ikhaya » iindaba » Iimveliso ze-TSL zoNyaka eziHlaziyiweyo kwiiSisombululo sayo seMonitorin kunye neeNkqubo zoLawulo lweSasazo kwi-NAB NY 2019
Iimveliso ze-TSL zoNyaka eziHlaziyiweyo kwiiSisombululo sayo seMonitorin kunye neeNkqubo zoLawulo lweSasazo kwi-NAB NY 2019
ENew York, ngo-Okthobha 7, 2019 - Products TSL, umyili okhokelayo kunye nomenzi wezisombululo zokuhamba komsebenzi wokusasaza, uya kufaka iiradio kunye nolawulo lwayo lwamva kwi-NAB NY 2019 (IBoth N155). Uhlobo luyaqhubeka nokuguqula izisombululo zalo ukuze luhlangabezane neemfuno zabathengi bayo kunye notshintsho kwindlela yokusebenza ye-IP. I-TSL iya kubalaselisa uhlaziyo kwiminikelo yayo yokujonga audio, kubandakanya iqonga layo le-SAM-Q, PAM-IP kunye ne-MPA1 yalo. Ukongeza, iya kubonisa uhlaziyo kwimisebenzi yayo yokulawula ukusasaza okuphezulu kunye ne-IP yayo yokulawula iBuddy, uluhlu lweeBhokisi zoNxibelelwano eziphakathi kunye neeBhanyabhanya ezihlaziywa.
I-TSL iya kufaka uhlaziyo kumgca wayo we-PAM-IP kunye nokusebenza kwayo okugqithileyo ngaphaya kokujonga kunye nevidiyo. I-PAM-IP iyaqhubeka ukuseta imigangatho ye-2022-6 kunye ne-2110 i-audiors. Ukusebenza kwayo kubandakanya ukulinganiswa kokukhwaza, ukumiliselwa kwemeta ngoqwalaselo olupheleleyo kunye nokubeka iliso kumjelo wokujongwa kwemijelo emininzi. Ukuqonda ukubaluleka kokulawulwa kwezixhobo ezingqongqo ngaphakathi kulwakhiwo lwezixhobo ze-IP, abathengi ngoku banokukhetha i-'I-In-band 'okanye' Ngaphandle-kweBhendi 'ukulawula kunye nabaphetheyo be-PAM-IP yabo. Usebenzisa inkqubo ye-TSL okanye ye-3rd yolawulo lweqela, ST-2110 kunye ne-ST-2022-6 ubhaliso oluninzi lwe-PAM-IP ngoku lunokugqitywa ngokusebenzisa i-Ember +, NMOS okanye iprotocol ye-API ye-RESTful API. Ukuboniswa kwakhona kwi-NAB NY kuya kuba kukukhutshwa komgangatho wokuvavanywa kwe-MPL ye-MPA1 ye-TSL kubandakanya ukuphuculwa kwemitha yeaudio ye-MPA1-SOLO-MADI kunye ne-MPA1-SOLO-DANTE, kunye nezinye iingqikelelo zephaneli yangaphambili ye-MPA1-MIX-MADI. Uluhlu lukwabonelela ngokuphuculwa kwezakhono zokulawula nge-SNMP yazo zonke i-MPA1 zokubeka esweni. Ezi zixhobo zokubeka iliso ezinokuthenjwa kunye nezicwebileyo zenza ukuba abasebenzisi bokugcina bakwazi ukujonga i-audio ngokuzithemba kunye nakwi-100mm enzulu, zilungele izicelo apho indawo yeyona nto iphambili, njengeepakethi zeenqwelomoya kunye neelori ze-OB.
Kwicala lolawulo, i-TSL iya kubonisa imisebenzi eyahlukeneyo ephakathi kolawulo lwe-master, playout kunye nokuhambisa njengenxalenye yemisebenzi yayo yolawulo oluphambili ngenxa yendlela yeNTL Flex Network, exhaswa yi Ulawulo lweDNF. Olu hlaziyo lubandakanya ukudityaniswa kwe-MOS kunye ne-ENPS kunye neeNews ukuze kwenziwe lula ukwenziwa kwegumbi lendaba ngokuvumela abasebenzisi ukuba bathathe ulawulo lwezixhobo ezibalulekileyo abaxhomekeke kuzo. Kwizinto zokudlala ezenzekelayo, abathengi ngoku banokubiza iindleko ngokukuko kwaye ngokulula benze ii-system zokuqala okanye i-backup / tertiary automation, ezinolawulo olulula noluthembekileyo kwizixhobo zevidiyo kunye nemifanekiso yokudlala yenkqubo. Ukongeza, abasebenzisi ngoku banokuphatha, batshintshe kwaye basasaze ii-SCTE ziyalela ngesandla okanye ngolawulo oluzenzekelayo ngokujonga ixesha kunye nezaziso xa umcimbi usenzeka.
I-TSL iya kuphinda ibalaselise uluhlu lwendawo entsha yolawulo lwendawo neendlela ezinqamlezileyo, kubandakanya ne-IP control Buddy, kunye nomgca wayo naphi na kweeBhokisi zee-Intanethi (AIBs). Ukulawulwa kwe-IP ye-TSL ye-TSL yinkqubo enamandla kodwa eyinkimbinkimbi elawula nayiphi na i-GPI / O-, eyiSibini- kunye nesixhobo esenziwe nge-IP. Ukuphawula ukusuka kwelinye ukuya kumaqhosha amane, i-IP control Buddy inokwenza imisebenzi elula 'kwi / off' -statany okanye ibangele isalvos entsonkothileyo, kwaye ubungakanani bayo bekhomputha buyenza ifaneleke kwimisebenzi yokubaleka yeeflaya kunye nemveliso yokushicilela ngokukhawuleza. Uchungechunge lwenkampani lwe-AIB lwenzelwe ngokukodwa intengiso ye-A / V, unomathotholo, amashishini kunye nosasazo lweTV, kwaye ivumela abasebenzisi ukuba basebenzise iinkqubo kwaye basebenze ngokugqibeleleyo ngaphandle kokwenza naluphi na ucwangco. Ukulawulwa kwesixhobo kunye nokuguquguquka kokusebenza, ii-AIB zinikezela ukuya kwi-16 GPI / Os kunye neendlela zokulawula izixhobo ezininzi, kunye ne-AIB-4 ikwabonelela nge-Ethernet, i-2-indlela ye-DTMF kunye nemodi yokudayela-up. Ii-AIBs zithutha ii-GPI kunye nee-on-Air tallies ziye ebaleni, naphi na apho uzifuna khona - kuyo yonke iidolophu, imimandla kunye namazwekazi - ukude. Isimo salo naluphi na ulawulo kunye nokujonga esweni kwenziwa lula ngesikhangeli sewebhu 'senkqubo-engenasimahla'.
Ukongeza, inkampani ibone ukwanda kwabathengi isidingo sokubona ulwazi olunobunzulu bokuhamba komsebenzi kwaye iyile iFlashBoard yokudibanisa ngaphandle komthungo kunye ne-TSL okanye nayiphi na enye inkqubo yolawulo lomntu wesithathu. Kwi-NAB NY, i-TSL iya kubonisa ukongezwa kwezinto ezininzi kunxibelelwano lweFlashBoard, kubandakanywa nenkqubo enobunkunkqele kunye neewotshi zehlabathi, amaxesha aphezulu emveliso, isibane esibhakabhakeni kunye nesibonakaliso sokukhanya, uphawu lwe-screen, umxholo wewebhu esekwe kunye neethayile zevidiyo. .
Kwiminyaka engaphezulu kwe-30, i-TSL isebenze ngqo kunye nabasasazi behlabathi abakhokelayo kunye nabayili bokuqulunqa ukuyila, ukwenza kunye ukuthengisa uluhlu lwezisombululo zokuhamba komsebenzi ezihamba lula ezisebenza ukwenza lula imisebenzi phakathi kosasazo lukamabonakude, intambo, Sathelethi, IPTV Amashishini e-IT. Ukugxila ekuqwalaselweni komsindo, iinkqubo zolawulo losasazo kunye nolawulo lwamandla, i-TSL iqinisekisa ukuba izisombululo zayo ziyayanelisa kwaye idlule kwezorhwebo, ezobuchwephesha kunye nezomsebenzi ezikhoyo ezisebenza ngokusekwe kwi-IT kunye nokuhanjiswa kwendabuko ukunceda abathengi bayo iindleko eziphantsi, ukuvelisa ingeniso kunye nokuhamba komsebenzi.
evakalayo Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Inkqubo yoLawulo UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli ukudityaniswa ip MPA1 NAB NY 2019 Iilori zangaphandle ezisasazwayo IPAM-IP I-SAM-Q Iintetho kunye nemisrya Products TSL BuTeknoloji TVU Networks I-Ultra HD Forum Injini yeVidiyo Workflows	2019-10-07
Previous: Ukuboniswa kweTelektha yokuThunyelwa kweMigca yeeMveliso kunye neeNkonzo ngokuThunyelwa kwiinzame ukuya kuHlobo oluQinisekisiweyo loMgangatho kwiNAB NY
next: I-RBS ikhetha iiNkqubo zePebble Beach zoLungiso lwazo zonke iindawo